Afaan Oromoo: Magaalaa Naqamtee fi dadammaqiinsa hogbarruu Oromoo - BBC News Afaan Oromoo
Afaan Oromoo: Magaalaa Naqamtee fi dadammaqiinsa hogbarruu Oromoo
27 Hagayya 2019
Goodayyaa suuraa Kitaabota daandii magaalaa Naqamtee irratti gurguraman.
Hojii kana yoon hojjedhe tarii cee'umsa aartii Oromoof gumaachuu danda'a jedheen daldala kitaabaa eegale jedha dargaggoo Gamtaa Billi.
Dargaggoo Gamtaa Billi magaala Naqamtee keessatti waggoota afur darbanif kitaaba daldalaa tureera.
Yeroo ammaas marfatawwan magaalaa Naqamtee keessaa isa tokko cinatti kitaabilee mata duree garaagaraa irratti xiyyeeffachuun barreeffaman dubbistootaaf dhiyeessa.
Sosochiin hog-barruu fi barmaatii kitaabilee dubbisuu jiraattota magaalaa Naqamtee yeroo gara yerootti fooyy'aa akka jiru kan himu dargaggoo Gamtaan, magaalattii keessatti dhalootni faayidaa kitaaba dubbisuu hubate baay'achaa jiraachuu dubbata.
"Maallaqni kitaaba irraa argamu nama hin jijjiiru. Bu'aansaa guddaan hawaasa kana ceesisuu fi akka inni dubbisee of jijjiiru gochuudha," jedha daldalaan kitaabaa kun.
Kitaabilee 'Loojikii' fi 'Aramaa' jedhaman maxxansiisun kan beekkamu barsiisaan yunivarsiitii Wallaggaa Dastaa Alamaayyoo magaalota Oromiyaa garaagaraa keessa deemen jira. Sochiin aartii magaala Naqamtee garuu addadha," jechuun hima.
Goodayyaa suuraa Barsiisaa yuunvarsiitii Wallaggaa Dassee Alamaayyoo
Barreessaan kun magaalattii keessatti lakkoofsi barreessitootaa, sochiin gurgurtaa fi raabsa kitaabilee akkasumas sagantaaleen aarti godinaalee biroorraa sadarkaa fooyyee jedhamurra akka jiranis dubbata.
Kana malees kutannoon daldaltoota kitaabaa kitaabilee Afaan Oromoo dur barreeffaman dabalatee isaan haaraa barbaadanii fiduun gabaaf dhiyeessuu irratti qabanis olaanaa ta'uu barsiisaa Dastaan hima.
"Namni seenaa beekuu barbaada…"
Kitaabilee Afaan Oromoo adamsanii dubbisuu irratti daddamaqiinsa guddaatu uumame-dargaggoo Abdii Ittafaa
Dargaggoo Abdii Ittafaa namoota sagantaalee hogbarruu magaala Naqamtee qindeessan keessaa tokko.
Waarin aartii magaala Naqamtee bara 2009 irraa eegalee eebba kitaabilee fi fiilmii itti fufiinsaan qopheessaa jiraachuu hima.
Sagantaa waarii aartii magaalattii kanarattis odeessaalen, baacon, walaloon, diraamaawwan, shubbisawwan aadaaf ammayyaa, agarsiisni uffataalee aadaa akkasumas qeeqni kitaabilee yeroo yeroon akka dhiyaatan dubbata.
Abbaan Afaan Oromoo eenyu?
Korri hundeeffama akkaadaamii Afaan Oromoo eegale
Barattootni yunivarsiitii Wallaggaa, miseensootni gumii Afaan Oromoo manneen barnoota garaagaraa, keessummootni magaala Finfinnee dabalatee iddoowwan garaagaraatii affeeraman immoo hirmaattota sagantaa kanaati.
Sagantaan waarii aartii kun dagaagina barmaatii dubbisa kitaabilee dargaggoota fi namoota buleeyyii magaala Naqamteef bu'uura ta'uusaa kan himu dargaggoo Abdi Ittafaa, lakkoofsi kitaabilee magaalattii keessatti barreeffamanii gabaaf dhiyaatan yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu hima.
"Kitaabilee Afaan Oromoo adamsanii dubbisuu irratti daddamaqiinsa guddaatu uumame" jedha.
Kitaabileen magaala Naqamtee keessatti barreeffaman baay'een isaanii siyaasa Oromoo irratti kan xiyyeefatan ta'uu fi yeroo keessa garuu namootni ogummaa isaanii bu'ureeffachuun kitaabilee falaasamaa, tekinoloojii fi diinagdee barreessaa akka jiranis dargaggoo Abdi hima.
Gama biraatin "Namni seenaa beekuu barbaada" kan jedhu daragaggoo Gamtaa, magaala Naqamtee keessatti kitaabileen asoosamaa baay'inaan akka maxxanfaman fi dubbistoota heddu kan qaban immo kitaabilee seenaa, xin-sammuu fi hafuuraa akka ta'an dubbata.
'Kaleessi har'a miti, har'i ammoo boru hin ta'u'
Yuunivarsiitiin Wallaggaa Akkaadamii Afaan Oromoo hundeessuufi
Barreessitootni fi dubbistootni hojiilee hog-barruu magaala Naqamtee dameen aartii magaalatii akka dagaagu gumaachaa jiraatanis dhimmootni imala kana duubatti harkisan akka jiranis namootni BBCn haasofsiise himu.
Rakkoolee kunneen keessaa tokko immoo qaamoleen mootummaa sochii aartii gara dhimma siyaasaatti jijjiirun hooggantoota gumii aartii dabalatee namoota biroo yeroo adda addaatti hidhuu isaanii akka ta'e dubbatu.
Kana malees gurgurtaan kitaabilee bifa qindaa'aa ta'en adeemsifamuu dhabuu fi iddoowwan gurgurtaa fi dubbisa kitaabilee kan akka oolmaa dargaggootaa bulchiinsa magaalichaan mijaa'uu dhabuun rakkoolee isaan biroo ta'uu jiraattotni magaalichaa himu.
Gama biraatin hirmaannaan dubartootaa fooyya'aa jiraatus hanga barbaadamu akka hin taane kan himtu barreessituun kitaaba 'Duguuggaa' Gaaddisee Alamaayyoo, barreessitootni dubartootni kitaaba gulaalchisuufillee barreesitoota dhiirolif dursa kennuu dabalatee rakkooleen isaan mudatan kan biroon akka jiranis dubbatti.
Afaan Oromoo: 'Giddu-galeessi to'atu tokko ni barbaachisa'
26 Fuulbana 2018
Gammadoo Jamaal: Biyya hambaatti fiilmii Afaan Oromoo
29 Sadaasa 2017
Viidiyoo Nama Afaan Oromoo waggoota 25'f barsiisaa turaniin wal baraa
5 Onkololeessa 2017
Yunivarsiitiiwwan keessatti barumsi adda cite, waraanni bobbaafame